Fanaanada Saado Cali oo Isbitaalka Laga soo saaray
Updated About:307 days ago 0
Fanaanada qaranka Soomaaliya Saado Cali Warsame oo xalay shilgaari ku gashay magaalada Nugaal ayaa saakay Barqadii laga soo saaray Isbitaalkii ay kujirtay kadib markii ay kasoo raysay xaaladeeda Caafimaad.
Wasiir ku xigeenka wasaarada caafimaadka puntland Maxamed Xirsi Ducaale oo lahadlayay Bbc-da qeeybteeda laanta Afka Soomaaliga ayaa waxa uu sheegay in fanaanada Saado Cali laga soo saaray isbitaalka kadib markii ay soo hagaagtay xaaladeeda caafimaad.
Wasiirka ayaa sidookale sheegay in dhaqaatiirta isbitaalka Gorowe ay sifiican ugu dadaaleen baxnaaninta fanaanada.
Wasiirada Caafimaadka puntland (Caasho Geelle Diiriye) oo ahayd masuulkii sida weyn ugu soo dhoweeyay Saado markii ay gaartay puntland ayaa kahadashay dhaawaca soogaaray Fanaanada ayaa waxay tiri: “runtii Saado Cali waa qof halyeey Soomaali ah waxayna doorweyn kuleedahay Nabadda Somaliya waxaana Allah kaga baryeeynaa inuu degdeg u caafimaadsiiyo”.
Saado Cali oo qudheeda wareysi kooban siisay Bbc-da markii laga soo saaray isbitaalka ayaa waxay sheegtay ineey ku faraxsantahay mar hadii ilaah u dhib yareeyay dhaawaca soo gaaray sidookale waxay u mahad celisay dhaqaatiirta isbitaalka Gorowe iyo shacabkii soo booqday.
“Dhaawaca isoo gaaray waxa uu ahaa mid fudud alaana kumahadsan,qof walbo waxa uu ujoogaa waa geeri, balse ilaah mahadiis sidaad ujeedaan hada waan fiicanahay, shacabka soomaaliyeedna ha isdajiyaan, Soomaaliyana guul iyo nabad ayaan u rajeeynayaa” ayay tiri Saado.
Dhanka kale shilka gaari ay ku dhaawacantay saado ayaa waxaa dhaawac kasoo gaaray dad kale waxaana hada sida wararka lagu helayo ugeeriyooday dhaawac soo gaaray wariye lagu magacaabo (Jaamac Maxamed Nuur), sidookale waxaa isbitaalka wali kujira wadihii gaariga ay saarnayd Saado kaasoo isna uu dhaawac kasoo gaaray.
Madaxweynaha maamul Goboleedka Puntlan Faroole iyo kuxigeenkiisa ayaa isbitaalka ku booqday Fanaanada Saado Cali Warsame intii ay ku jirtay Isbitaalka
Girl Friendly Spaces Latets News
Majaajilistayaasha Muqdisho Ilkace, Jacfar iyo Tarzan maxaa dhaxmaray Daawo
Nabadoon xalay lagu dilay Waqooyiga Gaalkacyo
Madaxda Urur goboleedka IGAD oo saakay shir uga furmaya Addis-Ababa
Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda Soomaaliya oo booqasho ku jooga Sucuudiga
Labo gabdhood oo walaalo ah ayaa doorwayn ka qaatay dib u dhiska dalka
Sawiro:Gabar Chines ah oo korkeeda oo dhan ay tin dabooshay
Xasan Maxamed Cismaan [Xasan Xaaji] oo Ku Dhawaaqay inuuu Yahay “Madaxweynaha” Jubbaland
R/wasaare Saacid oo ka hadlay Mooshinkii Fashilmay
Somalia: Violence in Somalia scares investors, aid workers
Canadian sisters on front lines of rebuilding Somalia
Somalia: Somalia celebrates the 50th Anniversary of the OAU in Mogadishu
Refugee from war-torn Somalia has ultimate goal of being doctor